Imali yokutshintsha Yuan (CNY) Ukuze Rand (ZAR) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 17:06
Yuan - Rand ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
17:06:26 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 CNY = 2.19 ZAR
Ukutshintshiselana ngeMali ye-Forex-amaxabiso okwenyani okwenyani ayo yonke imali. 1 yuan ukuya 2.19 Rand kutshintshiselwano nge-Forex. Kanye kwimizuzwana engama-30, yuan Ixabiso lokutshintshiselana lihlaziywa. Ukutshintsha kwexesha lokutshintsha kwexesha.
Itshathi Forex yorhwebo Rand - Yuan ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo renminbi Ukuze Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi ye yuan ukuya Rand inqanaba lotshintsho kwi 16 UTshazimpuzi 2021 iboniswe kwiwebhusayithi yethu. Ukujonga ngokufanelekileyo izinga lokutshintshiselana kwi-Forex, siyibonisa kwigrafu. Sebenzisa izixhobo zokusebenza kwitshathi kwizo kanye yuan ukuya Rand. Igrafu yokutshintsha kwemali iyitshintsha ngokuzenzekelayo rhoqo kwimizuzwana engama-30.
Tshintshela Yuan Ukuze Rand Yuan Ukuze Rand Imali yokutshintsha Yuan Ukuze Rand imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha yuan (CNY) ukuba Rand ngelo xesha
Yonke imzuzu sibonisa yuan ukuya Rand. Izinto eziguquliweyo ze yuan ( CNY) ukuya ku Rand ngalo mzuzu ngu- -0.0000 ZAR. Imbali yamanani otshintshiselwano kwimizuzu yokugqibela ibonisiwe kwitafile. Sine tafile yemilinganiselo yemizuzu eli-10 yokugqibela yokujonga ngokulula.
2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.20
Lokurhweba ngekhompyutha yuan (CNY) ukuba Rand urhwebo lilixa lokugqibela
Imbali ye yuan ukuya Rand yure nganye. Ukukhula kwe yuan ( CNY) ukuya ku Rand ngeli lixa yile - 0.0010 ZAR. Imbali eyi-10 ye yuan ukuya Rand evela kwi-Forex etafileni kwiphepha. Kulungele ukuthelekisa utshintsho kumanani otshintshiselwano ngeyure nganye.
2.19 2.20 2.20 2.20 2.20 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
Lokurhweba ngekhompyutha yuan (CNY) ukuba Rand Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
17:06 16:06 15:06 14:06 13:06 12:05 11:05 10:05 08:49 07:35
2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.20 2.20 2.19 2.19 2.19